सेल्टल्टले शीर्ष छवि स्क्रैप युक्तिहरू प्रदान गर्दछ
Google र अन्य खोज ईन्जिनियरिङ्हरुमा परिष्कृत वेब स्क्रैपर सामग्री खींच्न र साइट सूचकांक गर्न. उद्यमहरू, प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरूले तिनीहरूको काम पूरा गर्न विभिन्न क्र्रालिंग र स्क्रैपिंग उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्।. यदि तपाईं आफ्नो व्यवसाय बढ्न चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई गतिशील साइटहरूबाट एक विश्वसनीय डेटा अङ्कको जानकारी हटाउनु पर्छ. आयात गर्नुहोस्. io र किमोनो ल्याबहरू राम्रो विकल्प हुन्. यी उपकरणहरूको साथ, तपाइँ तस्विरहरू ठीकसँग स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. सामग्रीबम्बन इन्टरनेटमा सबैभन्दा प्रसिद्ध र उत्तम छवि स्क्रैपर्स मध्ये एक हो. यसको सबैभन्दा विशिष्ट विशेषताहरू तल उल्लेख गरिएको छ.
1. अनुक्रमणिका वेबसाइटहरु र ब्लगहरु लाई सहयोग गर्दछ:
यदि तपाईंले हालै ब्लग वा साइट विकसित गर्नुभएको छ र तपाईंको वेब पृष्ठहरु लाई सूचित गर्न चाहानुहुन्छ, ContentBomb तपाईंको लागि सही विकल्प हो. अन्य साधारण स्क्रैपिंग उपकरणहरूको विपरीत, यसले तपाईंको छविहरू स्क्रैप गर्दछ र क्रल गर्ने प्रक्रियालाई सजिलो र छिटो बनाउँछ. तपाईं आफ्नो खोज इञ्जिन रेटिङ सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र नियमित रूपमा सामग्रीबम्बको साथ तस्बिरहरूको गुणस्तरको निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ.
2. मूल्य निर्धारण जानकारी सजिलै संग धकेल्छ:
सामग्रीबम्ब संग, तपाईं विभिन्न वेबसाइटहरूबाट मूल्य सजिलै संगोष्ठी गर्न सक्नुहुनेछ. यसको अतिरिक्त, तपाईं छविहरू एयरलाइन वेबसाइटहरू, किनमेल साइटहरू, समीक्षा साइटहरू, र अन्य समान सञ्जालहरूबाट प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ. सामग्रीब्याम्पले वांछित छविहरूबाट डेटा निकाल्दछ र विभिन्न उत्पादनहरूको मूल्य तुलना गर्नेछ, तपाईंको काम सजिलो बनाउनेछ. सबैभन्दा राम्रो भाग यो उपकरणले मूल्य निर्धारण जानकारी सम्पादन गर्दैन, र तपाईले विश्वसनीय र प्रामाणिक नतिजाहरू मात्र पाउनुहुन्छ. सामग्रीब्रब विभिन्न साइटहरूको तुलना गर्न राम्रो छ र डेटाबेसमा आफ्नै डेटाबेस बचत गर्दछ.
3. कुनै पनि स्क्रैप ढाँचा र वांछित ढाँचाहरू प्राप्त गर्नुहोस्:
सामग्रीबम्ब कुनै पनि प्रकारको डाटा स्क्रैप गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ, जस्तै छविहरू, पाठ, PDF कागजातहरू र एचटीएमएल फाइलहरू।. एकपटक डेटा पूर्ण रूपमा निकालिएको बेला, तपाइँ यसलाई CSV वा JSON ढाँचामा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ वा अफलाइनका लागि तपाईँको हार्ड ड्राइभमा सीधा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।.
4. एकाधिक अनलाइन स्रोतहरू:
सामग्रीबम्बनमा अनलाइन डाइरेक्टरीहरू, आरएसएस र एटम फीडहरू, समाचार वेबसाइटहरू, भ्रमण पोर्टलहरू (जस्तै ट्रीगोगोगो र ट्रिपोडभिन्डर), ई-वाणिज्य साइटहरू (अमेजन र इबे) र अन्य यस्तै सञ्जालहरू लक्षित गर्न सक्छन्।. यसले उपयोगी छविहरू पहिचान गर्नेछ र तपाइँका आवश्यकताहरूमा आधारित हुनेछ स्क्रैप डेटा . यो अनलाइन फोरम र समीक्षा साइटहरू पनि लक्षित गर्दछ, तपाईंलाई तुरुन्तै परिणामहरू प्राप्त गर्दै. यसले सजिलै JPG र PNG फाइलहरूबाट सामग्री स्क्रैप गर्न सक्छ.
5. स्वचालित रूपमा तपाईंको साइटमा गुणस्तरको सामग्री प्रकाशित गर्नुहोस्:
ContentBomb सँग, तपाईं स्वचालित रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा गुणस्तरको सामग्री प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि सामग्री ढाँचा गर्न आवश्यक छैन।. एक पटक डाउनलोड र सक्रिय भएपछि यो उपकरणले तपाईंको पोष्टहरू अनुसूचित गर्नेछ र तपाईंको समयलाई हदसम्म बचत गर्नेछ. तपाईं यसको टेम्पलेट र उल्लेखनीय र व्यावसायिक रूपमा हेर्नका लागि यसको टेम्प्लेट र विषयवस्तुहरूबाट पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
6. सबै मानक विशेषताहरू:
सामग्रीब्याक यसको BotBomb मोड्युलका लागि सबै भन्दा राम्रो चिन्ता छ र तपाइँलाई विभिन्न स्क्रैपिंग विधिहरू नक्कल गर्न सजिलो बनाउनुहुन्छ।. यो उपकरणको साथ, तपाई छवि लाइब्रेरीहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, भिडीयोहरू अपलोड गर्नुहोस्, र भिडीयो फाईलहरू, र तपाईंको सामग्री कुनै पनि समयमा, तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ. यसले सोशल मिडिया साइटहरूको डेटा पनि निकाल्छ र सबै अपरेटिङ सिस्टम र वेब ब्राउजरसँग मिल्दो छ. तपाईं सजिलै संग स्वत: सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ र यस सेवाको साथ आन्तरिक र बाह्य लिङ्कहरू विकास गर्न सक्नुहुन्छ Source .